Lova tsy azo eritreretina - Church of God of Switzerland Switzerland
lahatsoratra > Ny fahasoavan'Andriamanitra > Lova tsy hay lazaina
Efa naniry handondòna teo am-baravaranao ve ianao milaza aminao fa ny dadatoan'ny mpanankarena iray tsy mbola henonao akory dia ho faty ary namela vola be ho anao? Ny fiheverana fa ny vola hivoaka dia tsy mahaliana, nofinofin'ny olona maro ary foto-kevitry ny boky sy filma maro. Inona no hataonao amin'ny harena vao hita? Inona no fiantraikan'izany teo amin'ny fiainanao? Hanamboatra ny olanao rehetra ve izy ary hamela anao handeha amin'ny lalana miroborobo?
Tsy ilaina aminao io faniriana io. Efa nitranga izany. Manana havana mpanan-karena efa maty ianao. Nahafoy ny sitrapony izay nampiasainy anao ho mpahazo tombontsoa lehibe izy. Tsy azo atao fanamby na hovana izany any amin'ny fitsarana rehetra. Tsy misy na iray aza lany amin'ny hetra na ny mpisolovava. An'ity daholo.
Ny singa farany amin’ny maha-izy antsika ao amin’i Kristy dia ny ho lova. Izany dia mitondra antsika ho eo amin’ny tampon’ny hazo fijaliana maha-izy antsika – efa eo amin’ny famaranana lehibe isika izao: “Zanak’Andriamanitra sy mpiara-mandova amin’i Kristy, izay miombona amin’ny lovany amintsika” (Gal. 4,6-7 sy Rom. 8,17).
Nanan-kery ilay fifanekena vaovao rehefa maty i Jesosy. Isika no mpandova azy ary ny teny fikasana rehetra nataon’Andriamanitra tamin’i Abrahama dia anareo (Gal. 3,29). Ny fampanantenana ao amin’ny sitrapon’i Jesosy dia tsy azo ampitahaina amin’ny fampanantenana eto an-tany amin’ny sitrapon’ny dadatoa: vola, trano na fiara, sary na zavatra tranainy. Isika no manana ny hoavy tsara indrindra sy mamiratra izay azon'ny rehetra eritreretina. Tsy takatry ny saintsika anefa ny tena dikan’ny hoe mitoetra eo anatrehan’Andriamanitra mba hitsidika ny mandrakizay, ny fandehanana amim-pahasahiana any amin’ny toerana tsy mbola nisy na dia iray aza!
Amin'ny fanaovana didim-pananana dia tsy mila manontany tena isika hoe inona no avela amin'ny fomba mahomby ho antsika. Afaka matoky ny lovantsika isika. Fantatsika fa hahazo ny fiainana mandrakizay isika (Titosy 3,7), miampy ny fanjakan’Andriamanitra (mpanjaka), izay nampanantenaina ho an’izay rehetra tia Azy” (Jak. 2,5). Nomena ny Fanahy Masina isika ho antoka fa hahazo izay rehetra nampanantenaina ao amin’ny sitrapontsika isika indray andro any (Efes. 1,14); ho lova lehibe sy be voninahitra izany (Efes. 1,18). Hoy i Paoly ao amin’ny Efes. 1,13: ao aminy koa ianareo, rehefa nandre ny tenin’ny fahamarinana, dia ny filazantsaran’ny famonjena anareo, dia tao aminy koa ianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin’ny Fanahy Masina nampanantenaina. Amin'ny lafiny iray, efa eo amin'ny lalana mankany amin'ny fanambinana isika. Feno ny kaontin’ny banky.
Azonao an-tsaina ve hoe manao ahoana ny fahazoana harena toy izany? Angamba isika afaka mahatsapa izany raha alaintsika sary an-tsaina ny tarehimarika Disney amin'ny malala McDuck. Ity toetran'ny sariitatra ity dia lehilahy manankarena maloto izay maniry ny kitapom-bolany. Ny iray amin'ireo zavatra tiany indrindra dia ny milomano manerana ireo tendrombohitra volamena. Saingy ny lovantsika miaraka amin'i Kristy dia ho faran'izay lehibe kokoa noho ny haren'ny fananana mpampijaly kely.
Iza izahay Ao amin'i Kristy no misy antsika. Nantsoina ho zanak'Andriamanitra isika, nova vaovao ho antsika ary rakotry ny fahasoavany. Antenaina hamoa sy maneho ny fiainan'i Kristy isika, ary amin'ny farany dia handova ny harena sy ny fifaliana izay ananantsika ihany isika. Tsy tokony hanontany tena amin'ny tenantsika hoe iza indray isika. Ary isika tsy tokony hitady ny momba antsika amin'ny zavatra hafa na iza hafa afa-tsy amin'i Jesosy.